Islam Virus: October 2012
မိုဟာမက်ကြီးဟာ သူ့ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ်မှာ သူ့ မြေး အရွယ်လောက်ရှိတဲ့၉နှစ်(၃တန်းအရွယ်)အရွယ် ကလေးသူငယ်လေး ကိုမုဒိန်းကျင့်ခဲ့ပါတယ် ။
၉နှစ်(၃တန်းအရွယ်)အရွယ်ကလေးသူငယ်လေး ကို အသက်၅၄နှစ်အရွယ် သေခါနီးကြီး တဏှာရူးကြီး မိုဟာမက် က မုဒိန်း တက်ကျင့်နေတဲ့ ပုံ ကို။
အသက် ၅၄နှစ်အရွယ်သေခါနီးကြီး မိုဟာမက် က အသက် ၉နှစ် ကလေးကို အတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို
၉နှစ်(၃တန်းအရွယ်)အရွယ်ကလေးသူငယ်လေး မှာ သေလောက်အောင်နာကျင် အော်ဟစ်၊ငိုယို တောင်းပန်….
သေခါနီးတဏှာရူးကြီး မိုဟာမက် က ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ သူ့ မြေးလောက်ရှိတဲ့ ၉နှစ်(၃တန်းအရွယ်)အရွယ်ကလေးသူငယ်လေးကို မရ၊ အရ မုဒိန်းကျင့်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို…..
အလ္လာဟ်ကြီး အလို အရ မုဒိန်းကျင့်ရ တာပါလို့ သောက်ရှက်မရှိပြောသေးတယ်။
အဘယ်သို့ သော ဘုရား၊ အဘယ်သို့ သော ဘာသာတရား က ၉နှစ်(၃တန်းအရွယ်)အရွယ်ကလေးသူငယ်လေး ကို မုဒိန်းကျင့် ခိုင်းလဲ။
အဲဒီလို ကျင့်ခိုင်း ရင်လည်း ….အဲဒီလို ကျင့်ခိုင်းတဲ့ အလ္လာဟ်ကြီးဆိုတဲ့ ကောင်ကြီးဟာ မကောင်းဆိုးရွားမိစ္ဆာကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့။
အင်မတန်မှ အော့နလုံးနာစရာ၊ ရွံ စရာကောင်းသော အောက်တန်းဇား၊ မုဒိန်းကောင်ကြီးမိုဟာမက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘဲ မိုဟာမက်ဟာ ဖအေလုပ်တဲ့လူကို လှည်လှီးသတ်ပြီး သတ်ပြီး သမီးဖြစ်သူကို မုဒိန်း ကျင့်တာတို့ ၊
လင်လုပ်တဲ့သူကို လှည်လှီးသတ်ပြီး မယားဖြစ်သူကို မုဒိန်း ကျင့်တာတို့ စတဲ့ အင်မတန်မှ အောက်တန်းကျ မိုက်ရိုင်း ယုတ်မာပက်စက် ခဲ့တဲ့ အော့နလုံးနာစရာကောင်းတဲ့ မုဒိန်းကောင်ကြီးမိုဟာမက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အော့နလုံးနာစရာကောင်းတဲ့ မုဒိန်းကောင်ကြီးမိုဟာမက်ကို မွတ်ဆလင်တွေက လူ့ သမိုင်းမှာ ( ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးတဲ့လူသားတွေ အားလုံး အားလုံးထဲမှာမှ တုနှိုင်းမရတဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံး လူသား ) အမြင့်မြတ်ဆုံး တမန်တော်ကြီးတဲ့။
ဒါကြောင့် ဂျပန်ခေတ်တုန်း က ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုး တွေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် ကို မွတ်ဆလင်တွေက ၀င်ဆီးပြီ……..
ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်မလေးတွေကို သူတို့ အဖေအမေရှေ့ မှာ မွတ်ဆလင်တွေ က ၈ယောက်ကိုးယောက် ၀ိုင်းမုဒိန်းကျင့်ပြီး
အဲဒီလို သမီးဖြစ်သူမုဒိန်းကျင့် ခံနေရတာကို ဖအေ၊မအေတွေကိုကြိုးတုပ်ကာကြည့်ခိုင်းပြီး ( သေတာတောင် အရက်စက်ဆုံးနာကျည်းခံစားရပြီးမှ သေအောင် )
သမီးဖြစ်သူမုဒိန်းကျင့် ခံနေရတာကို ဖအေ၊မအေတွေကိုကြိုးတုပ်ကာကြည့်ခိုင်းပြီး မှ တစ်မိသားစုလုံးကိုလည်လှီးသတ်ပစ်တာ စတဲ့
ကူတောင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်သွေးချင်းများ ကို ဘယ်လို ညှဉ်းဆဲပြီး မှ ရက်ရက်စက်စက် သတ်သလဲကြည့်ပါ။
အင်မတန်မှ အောက်တန်းကျ၊ မိုက်ရိုင်း၊ လူးပါးဝ ၊ ယုတ်မာပက်စက် လုပ်ရပ်တွေဟာ
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့သခင်မုဒိန်းကောင်ကြီးမိုဟာမက် ခေတ်ကတည်းက စခဲ့တဲ့ အောက်တန်းစား သောက်ကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့သခင်မုဒိန်းကောင်ကြီးမိုဟာမက် ကိုယ်တိုင် က မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းလုပ်ပြခဲ့တော့
မိုဟာမက်ကို အလ္လာဟ်ထက်တောင် ပိုကြောက် ရတဲ့
မွတ်ဆလင်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးအောက်တန်းကျ မိုက်ရိုင်း၊ လူးပါးဝ ၊ ယုတ်မာပက်စက် နေတာ ဘာမှမဆန်းတော့ပါဘူး။
Muhammad deflowered pre-pubescent Aisha when he was 54 and she was 9.
Bukhari volume 7, #65:
"Narrated Aisha that the prophet wrote the marriage contract with her when she was six years old and he consummated his marriage when she(Aisha) was nine years old.
"Then the men and women got up and left. The Messenger of Allah consummated his marriage with me (Aisha) when I(Aisha) was nine years old.
"Aisha said, "The Apostle of Allah had intercourse with me(Aisha) when I (Aisha) was9years old."
( မှတ်ချက်။ ။ မူဆလင်တွေ ဗြောင်လိမ်မှာ စိုးလို့၊ ဟာဒီးစ် တွေ ထဲမှာ Sahih Bukhari ဆာဟိဘူကာရိ ဟတ်ဒီးစ် သည် မူဆလင်အများစု က authentic အဖြစ်ဆုံး အမှန်ဆုံးဟု တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း လက်ခံထားသော ဟတ်ဒီးစ်ဖြစ်ပါသည်။ တခြား ဟာဒီးစ် တွေဆိုရင် မူဆလင်တွေ ထုံးစံအတိုင်း ဗြောင်လိမ်အုန်းမှာ မို့လို့ )
မြန်မာ ( ပြည်ပေါက် ) မူဆလင် ဖေ့စ်ဘုတ်တွေ့လို့ ဘာများလဲလို့ ၀င်ကြည့်တာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရင်ဝ ကို ဓားမြှောင်နဲ့ စိုက်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။
အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ဦးဏှောက်ထဲကို ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ မူဆလင်တွေရဲ့ ဘယ် ဘာသာခြားနိုင်ငံ ရောက်ရောက် မူဆလင်တွေရဲ့ (ဘာသာခြား) မိခင်နိုင်ငံ ၊ (ဘာသာခြား) မိခင်လူမျိုး အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန် ကတော့ လေးစား လောက်ပါပေတယ်
Defending The Last Stronghold of Theravada Buddhism
Defending The Last Stronghold of Theravada Buddhism ....
ပျောက်ကွယ်ခံရတော့မဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် " ပူ " ရမှာ ပဲ
မူဆလင်တွေ ကျွေးမွေးထားတဲ့ သူ( မူဆလင်ခွေး)တွေ ကတော့..
ပျောက်ကွယ်ခံရတော့မဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ " အူ " ကြမှာ ပဲ
အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ ပါကစ္စတန်စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ က ရဟန်းသံဃာတွေကို လည် လှီးသတ်ဖြတ်ချေမှုန်း ပြီး အစ္စလာမ် နိုင် ငံ အဖြစ် သို့ သွတ်သွင်းလာခဲ့သော မွတ်ဆလင်အစ္စလာမ်မစ်တွေဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေ ကို တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံချေမှုန်းပြီး အစ္စလာမ် နိုင် ငံ အဖြစ် သို့ သွတ်သွင်းခဲ့သော အစ္စလာမ်မစ်မူဆလင်တွေ ဟာ
အခုဆိုရင် ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်နှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တွေကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းပြီး အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ မူဆလင်တွေတာဆူနေပါပြီ။
လက်တွေ့လည်း ဘက်ပေါင်းစုံ က မူဆလင်အင်အားများလာအောင် လုပ်နေတဲ့ အပြင်...
ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်နှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တွေမှာ လည်းဗလီတွေ ထောင်နဲ့ ချီဆောက်ပြီးပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် (၂) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံတို့ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ်သွားအောင် မွတ်ဆလင်တွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်
အစ္စလာမ်မစ်မူဆလင်တွေဟာ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ပျောက်ကွယ်ခံရတော့မဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် " ပူ " ရမှာ ပဲ
ပျောက်ကွယ်ခံရတော့မဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ " အူ " ကြမှာ ပဲ
ဗုဒ္ဓသာသနာစောင့်ရခိုင်/မြန်မာတွေ ကတော့ " ပူ " ရမှာ ပဲ....
မူဆလင်တွေမွေးထားတဲ့ ခွေးတွေ ကတော့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ " အူ " ကြမှာ ပဲ..
အစ္စလာမ်အယူဝါဒမှာ မူဆလင်အမျိုးသမီးတွေဟာ မွတ်ဆလင်အဖိုးကြီးတွေရဲ့ ကာမကို အမြဲတမ်းမငြင်းပဲဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။
အင်မတန်မှ ရွံစရာ အောက်တန်းနောက်တန်း ကျ ယုတ်ယုတ်မာမာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ် ... ညစ်ညမ်းတယ်ထင်ရင်ဆက်မဖတ်ပါနဲ့။
မိန်းမတွေဟာ ယောကျာ်းတွေရဲ့ ကာမကို
( စိတ်မပါဘူး) မခံချင်ဘူးလို့ ငြင်းတဲ့ မိန်းမကို အလ္လာဟ်ရဲ့ အမျက်တော်စူးရှပြီး
( စိတ်မပါဘူး) မခံချင်ဘူးလို့ ငြင်းတဲ့ မိန်းမ ဟာ...အင်မတန်ငရဲကြီးပြီး
ငရဲ ကျမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
Reason ရှိရမယ်။ အကြောင်းရှိရမယ်။ ဒါကြီး က သာမန်မှ မဟုတ်တာ....Reason ရှိရမယ်။
မွတ်ဆလင်မိန်းမတွေ ဟာသူတို့ ရဲ့ မိန်းမလေးယောက် ရှယ်လုပ်နေရတဲ့ " ဘုံ " လင်ကြီး နေ့ ည အချိန်မရွေး Xိုးဖို့မူဆလင်မိန်းမတွေရဲ့ လိင် အင်္ဂါ တွေကို အဆင် သင့်ပြင် ရမယ် ။ မငြင်းရဘူး။
ဒါကြီးကို ဘာသာလို့ ခေါ်နိုင်သလား။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် က လိင်ဆက်ဆံတာကို မခံချင်ဘူး ငြင်းတာနဲ့ ငရဲကျမယ်ဆိုတာ ဘယ်ဘာသာမှာ ကြားဖူးသလဲ?
ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ....ဒါကြီး က သာမန်မှ မဟုတ်တာ....Reason ရှိရမယ်။
ကြည့် ရတာ မိုဟာမက်ကြီး×ီးတောင်နေချိန် ( တဏှာရူးကြီးမိုဟာမက် သုတ်ကြောင်နေစဉ်မှာ) မှာ..သူ့ မယားတစ်ယောက်ကစိတ်မပါဘူး....မခံချင်ဘူးလို့ငြင်းလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာမိုဟာမက်ကြီးက စိတ်အရမ်းဆိုးသွားပြီး ၊ နွားသိုးကြိုးပြတ်ဖြစ်သွားပြီး အစ္စလာမ်မှာ မူဆလင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ယောကျာ်းတွေရဲ့ ကာမကို စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ...မပါသည်ဖြစ်စေ ....အချိန်မရွေးခံရမယ်။
စိတ်မပါလို့....မခံချင်ဘူးလို့ ငြင်းတဲ့ မိန်းမဟာ ....အလ္လာဟ်ရဲ့ အမျက်တော်စူးရှပြီး အင်မတန်ငရဲကြီးပြီး ငရဲ ကျမယ် လို့ ခတ်တည်တည်ကြီး အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ မွတ်ဆလင်မိန်းကလေးတွေဟာ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ.....မပါသည်ဖြစ်စေ အချိန်မရွေး သူတို့ ရဲ့ " ဘုံ " လင်ကြီး နေ့ ည အချိန်မရွေး လုပ်တာ ကို ခံရပါတော့တယ်။
အင်မတန်မှ ရွံစရာ အောက်တန်းနောက်တန်း ကျ ယုတ်ယုတ်မာမာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ အစ္စလာမ်ဟတ်ဒီး တွေမှာကို အတိအလင်းရေးထားတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ... ၉နှစ်သမီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာလား...အင်မတန်မှ မွန်မြတ်တဲ့ အပြုအမူပါ။
မိုဟာမက်လုပ်ခဲ့တဲ့ လူကိုလည်လှီးသတ်၊ ကလေးတွေ မုဒိန်းကျင့်တာ...မှန်သမျှ အစ္စလာမ်မူဆလင်တွေအတွက် ခြွင်းချက်မရှိ ၁၀၀%အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့...မူဆလင်ဆိုတာ အဲဒီ လိုကုရ်အာန်ကျမ်းတွေကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ သူတွေပါ။
ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ အဲဒီလို ကုရ်အာန်ကျမ်းတွေကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ မူဆလင်တွေနဲ့ deal လုပ်နေရတာပါ။
အစ္စလာမ် ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာလို့ မွတ်ဆလင်တွေ ပြောကြပါတယ်။
ဒီလောက်တောင် " ဘာသာခြားတွေကို လည်လှီးသတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ထားတဲ့ ကျမ်းချက် တစ်ရာကျော်ပါတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ ကို မင်းတို့ က ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာ လို့ ဘာသက်သေနဲ့ ပြောနေတာလဲ " လို့ မေးရင်
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာထဲ က ရှားရှားပါးပါး ငြိ်မ်းချမ်းတဲ့ Meccan Surahs လေးတွေကို ထုတ်ဖတ်ပြကြပါတယ်။
သူများဘာသာကို မဆဲရတို့၊ မင်းလဲမင်းကြိုက်တာကိုးကွယ်၊ ငါလည်းငါကြိုက်တာကိုးကွယ်၊
ဒီလိုမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောဆောင်တဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကုရ်အာန်စာသားလေးတွေဖြစ်တဲ့ Meccan Surahs လေးတွေကို ထုတ်ဖတ်ပြကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောဆောင်တဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကုရ်အာန်စာသားလေးတွေဟာ မူဆလင်မဟုတ်သူဘာသာခြား တွေကို ဗြောင်လိမ်ဖို့Taqiyya အတွက် အစ္စလမ် ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာဖြစ်ကြောင်း လှည့်စားဖို့ အတွက် အသုံးပြုဖို့ သီးသန့် တီထွင်ထားတဲ့ မက်ကာ ( Meccan Surahs) တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
Meccan Surahs ဆို တာ မိုဟာမက် မက်ကာမြို့ မှာ မွတ်ဆလင်အင်အား မတောင့်တင်းခင်၊ မွတ်ဆလင် လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အားစုနေတုန်း အချိုသတ်ပြီး စရိုက်တစ်မျိုးနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ဘေးကကြားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ က ကုရ်အာန်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ( ဥပမားthere is no compulsion in Religion, )
Medinan Sura ဆိုတာ ကတော့ မိုဟာမက် မက်ဒီနာ မြို့ မှာ လုံလောက်တဲ့မွတ်ဆလင်အင်အားတောင့်တင်းပြီး လက်နက်ပြည့်စုံတဲ့ အခါ နောက်စရိုက် တစ်မျိုးနဲ့(မျက်နှာဖုံးကွာကျ) ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ဘေးကကြားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ က ကုရ်အာန်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိုဟာမက်ု ကိုယ်တိုင်ရေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုဟာမက်က စာမတတ်ပေမတင်္တ
မိုဟာမက် ဟာ စာမတတ်ပေမဲ့ မယား အများအပြားရှိတာ မို့ မယားတွေနဲ့ ချိုမိုင်မိုင် ကစားနေရတဲ့ အတွက် စာသင်ဖို့ လည်း အချိန်မရှိပါဘူး။
မိုဟာမက်ဟာ စာတတ်ချင်စိတ်၊ စာသင်ယူချင်စိတ်လည်း ရှိခဲ့ဟန်မတူပါဘူး။
မိုဟာမက်ဟာ တစ်နေ့ တစ်နေ့မယားတွေနဲ့ ပဲ...
တစ် ခါတစ်လေ မိန်းမ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး မိန်းမကြီးလိုနေလိုက်၊ သိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
၉နှစ် ( ၃တန်း အရွယ် ) ကလေးငယ် အပါအ၀င် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကို မုဒိန်းကျင့်လိုက်
မိုဟာမက်ရဲ့ လိင်ကျေးကျွန်မယား ၂၂ယောက် အပြင် သူများ သားသမီးတွေ ၊ သူများမယားတွေကို မုဒိန်းကျင့်လိုက်၊
သူများ သားသမီးတွေကို ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားလိုက်၊ ဒါနဲ့ ပဲ အချိန်ကုန်နေပါတယ်။
သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံ အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မက်ကာ ( Meccan Sura ) တွေ ဟာ မိုဟာမက် အစောပိုင်းကာလ မွတ်ဆလင် အင်အားနည်းနေစဉ် လူသူလက်နက်အင်အား နည်းနေချိန်မှာ
ဘာသာခြားတွေကို လှည့်စား ဖို့ ( ပျားရည်နဲ့ ဝမ်းချဖို့ ) သုံးခဲ့တဲ့ Verses တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
( အစွန်းမရောက်သေးဘူး။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အစ္စလာမ် ဖြစ်နေသေးတယ်။ အချိန်မတန်သေးလို့ )
မက်ဒီနာ Verses ( Medinan Sura) တွေ က တော မိုဟာမက် က မွတ်ဆလင် လူသူလက်နက်အင်အား တောင့်တင်းပြီး
( မှည့်သွားပြီ ၊ အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်သွားပြီ)
မက်ကာမြို့ က ဂျူးတွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေကို သတ်ဖို့ အလ္လာဟ်က ညွှန်ကြားထားတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ Medinan Verses ( Medinan Sura) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
( ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီလို လုပ်လို့ ရပါလား????
ရပါတယ် အဲဒါ အလ္လာဟ်ရဲ့ အမိန့် ပါ။ ပြန်မပြောနဲ့ ၊ ပြန်မမေးနဲ့ ၊ ဆင်ခြေမတက်နဲ့ ။
အလ္လာဟ် က သူကြိုက်တဲ့ အချိန် မှာ ကြိုက်သလို ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်လျှော်တဲ့ စာသားနဲ့မိုဟာမက် ထင်သလို အစားထိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ )
ဒါပေမယ့် မူဆလင်မဟုတ်သူ ဘာသာခြား တွေ မသိကြတဲ့ အချက် က အဲဒီ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ က ငြိမ်းချမ်းတဲ့မက်ကာ Verse တွေ အားလုံး ( အားလုံး) ကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ မက်ဒီနာ ကျမ်းချက်တွေ အားလုံး က ထပ်ဆင့် ကျော်ဖြတ် အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာ ပါပဲ။
သဘော က ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မက်ကာကျမ်းချက်တွေ အားလုံး ဟာ အလ္လာဟ်ရဲ့ ထပ်ဆင့် အမိန့် တော် အရ ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပြည့်စုံတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လူသတ်ခိုင်းတဲ့ မက်ဒီနာကျမ်းချက်တွေ နဲ့လဲလှယ် လိုက်ပြီဆိုတာပါပဲ။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောဆောင်တဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မက်ကာ Surah တွေ ဟာ တရားမ၀င်တော့ပါဘူး။
မက်ကာ Surah တွေ ဟာ မူဆလင်မဟုတ်သူလူသားအားလုံးကို အစ္စလာမ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းချက်သက်သက်သာဖြစ်ပါတော့တယ်။
တစ်မျိုး က လိုအပ်ရင် မူဆလင်အင်အားမကောင်းသေးခင် အချိုသတ်ပြီး ဘာသာခြားတွေကို ဖိန့် ဖို့၊ အစ္စလာမ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဘာသာခြားတွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားတဲ့ for show Verse ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်မျိုး Medina Surahs က မှ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မသိတဲ့သူတွေကို ( မူဆလင် ဖြစ်စေ၊ မြန်မာယောင်ဆောင်ထားတဲ့ မူဆလင်တွေ ဖြစ်စေ ) က အစ္စလာမ်မှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကျမ်းချက်တွေ ပါတာပဲ ၊ ဘာပဲ ၊ ညာပဲ ဆို ရင်
ယုံလွယ်တတ်ကြတဲ့ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုး တွေ က " အော် ဟုတ်သားပဲ အစ္စလာမ်မှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကျမ်းချက်တွေ ပါသားပဲ "...ဆိုပြီးေ၀၀ါးသွားအောင်
အမှန်တော့ မူဆလင်တွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ကျမ်းချက်တွေ က မက်ကာ Surah ကျမ်းချက် ( အင်ကြီး )
မူဆလင်မဟုတ်သူတွေ ကို မူဆလင်တွေ အင်အားမကောင်းခင် မှာ အစ္စလာမ်သည် ငြိမ်းချမ်း တာဖြစ်ကြောင်း လိမ်ဖို့ သက်သက် ထည့်ထားတဲ့ ( အင်ကြီး ) အင်ကျမ်းချက်ကြီး :)
မူဆလင်တွေ အင်အားမကောင်းခင် မှာ မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို အချိုသတ်ပြီး လိမ်ဖို့ သက်သက်ထည့်ထားတဲ့ အင်ကြီး :)
သိပ် ကောက်ကျစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းပါပဲ။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာ အလ္လာဟ် နဲ့ မိုဟာမက်က မွတ်ဆလင်တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအစ္စလာမ် ဖြစ်ရေးအတွက် ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်ပွားစိုးမိုးရေး အတွက် မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူ လူသားအားလုံး ( ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့ အားလုံး ) ကို သတ်ခိုင်း၊ အစ္စလာမ်မဟုတ်တဲ့ ငြင်းပယ်တဲ့ ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေ အားလုံးကို ချေမှုန်းနှိမ်နင်း ခိုင်းတဲ့ အမှန်အကန်ကုရ်အာန်ကျမ်းချက်ပေါင်းတစ်ရာကျော် အပြည့်အစုံကို ဖတ်လိုလျှင် အောက်က လင့်ခ့်ကို သွားပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။
ဘယ်ဘာသာမှ၊ ဘယ်ဘုရားမှ လည်း စကားကို လိမ်လည်ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပြီး နှစ်မျိုး ပြောခဲ့တာ ဘယ်ဘာသာမှာမှ လည်း မရှိပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါ အစ္စလာမ် ပါ။
မွတ်ဆလင် ဆိုတာ အဲဒါတွေကို မွေးကတည်းက ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ သူတွေပါ။
အစ္စလာမ် ကို လက်မခံငြင်းပယ်တဲ့ မူဆလင်မဟုတ်သူ တွေရဲ့ လူ့အသက်တွေကို အောင်မြင်အောင် သတ်နိုင်ရင် အလ္လာဟ်ဘုံမှာ အပျိုစင် ၇၂ယောက်၊ လူပျိုပေါက် ၂၈ ယောက်နဲ့ ၂၄နာရီ လိင်ဆက်ဆံရမယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့
မှည့်ဖို့ အရှိန်ယူနေတာလား ။
မှည့်ခါနီးနေပြီလားဆို တာ သိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးမွေးနှုန်း လူဖေါက်တာ ဘယ် level ရောက်နေပြီလဲ။
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ လူဦးရေ ဘယ် level အထိ ရောက်ပြီလဲ
ဒါတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မည့်သို့ ပင်မွတ်ဆလင်များ လိမ်လည် လှည့်ဖျား ( Taqiyya ) စေကာမူ ကုရ်အာန်ကျမ်းနဲ့အစ္စလာမ် နည်းဗျူဟာအရ Steps တွေကို နားလည်သဘောပေါက်ထားရင်
မည်သည့်နိုင်ငံ ၊ မည်သည့်ဒေသ က မွတ်ဆလင်ဖြစ်စေကာမူ သူတို့ ဧ။်အခြေအနေကို မှန်ကန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ အမြန်ကျဆုံးရမည် ။